who is responsible for the bomb attack? | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Letters from Michigan 76
my friend Myo Min Htike →
ပုဆိုးဝတ်စစ်စစ် တဦးနှင့် ပုဆိုးတပိုင်း ဘောင်းဘီ တပိုင်း ၀တ်(၂)ဦးက စက်ဘီး တာရာ အစုတ်ကြီး တခုစီ ပေါ်တွင် ထုံးဖြူ နှင့် ရေးထားသည့် သမတ ဟူသော စာလုံး သုံးလုံးပါ စလွယ် တခုစီ လွယ်လျက် “သန့်ရှင်းရေး သန့်ရှင်းရေး´´ ဟု တတွတ်တွတ် ရွတ်ဆိုရင်း အ၀တ်စုတ် တစစီ နှင့် ကြမ်းတိုက်နေဟန်ရှိစေ။
ပြည် ထဲဝန်။ ။ မှန် လှပါ။ ဘုန်းတော် ကြောင့်ဗုံးများ အတု ရော အစစ်ပါ ချပြီး“တပြည်လုံး အနှံ့ ဗုံး လှန့် ရေး ´´ စီ မံချက် ကို အကောင် အထည် ဖော် နေပါတယ် ဖလား။ နောက်ပြီး ဟိုအမျိုးသမီးကိုလည်း စာပို့ပြီး ခြိမ်းခြောက် ဟိန်းဟောက်ထားပါတယ် ဖလား။ အဲဒီ အမျိုးသမီးက မကြောက် တတ်မှန်း သိလို့ ကြောက် နေကျ အဖိုးအို ရွတ်တွကြီးဆီပါ ပူးတွဲ စာပို့ထားပါတယ် ဖလား။ ဒါတင်မက ဒဒင်းစာတွေထဲကနေ စောင်းစောင်း ပြီး ရေးနေကြ စောင်းပါးတွေ ရေး ပြီးတော့လည်း ခြိမ်းခြောက်ထားပါတယ် ဖလား။
စစ်သေနာငပိချုပ် ။ ။ ဟိတ် တိတ်စမ်း။ ၂၀၀၈ ရဲ့ စစ်ကျွန်ပြု ဥပဒေ အရ အာဏာကော လျှာနာခွါနာပါ သိမ်းပစ် လိုက်ရ။ ရှိတာတွေ ဒီထက် ပြောင်သွားမယ်။ ထိုစဉ်“၀ုန်း´´ ခနဲ ပေါက်ကွဲ သံကြီး ကျယ်လောင်စွာ ကြားလိုက်ရစေ။ ဇာတ်ခုံ တခုံလုံး မီးခိုးလုံးများ ဖုံးလွှမ်းသွားစေ။
မင်းတြားကြီး။ ။ “စစ်ခုံရုံး တင်ခံရ မှာ ကြောက် လို့ တွင်းအောင်းပြီး နေနေတာကို ခုတော့ လိုဏ်ဂူ ထဲ လာပြီး ဗုံး ဖောက်ခွဲ လို့ မာလက ဈန်ကြွ ငရဲကို စုတေရပါပေါ့။ သယ် ပြည်ထဲရေးဝန်စုပ် ဘယ်ချောင်ကုပ် နေတာလဲ။ ဖော်ထုပ်စမ်း။ ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု တရားခံဖော်သလို။ ဒဒင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွေမှာများ ဗုံးခွဲတရားခံတွေ ဖော်ထုပ်ထား လိုက်တာ စုံထောက်ဝတ္တု တွေ ဖတ်နေရသလိုဘဲ။ ပြောစမ်း ဒီ ဗုံးဖောက်ခွဲတာ တရားခံ ဘယ်သူလဲ KNU လား KIA လား SSA အရှေ့အနောက် တောင် မြောက် လား ABSDFZZZZ လား။
Posted by oothandar on July 10, 2011 in Gyaw Dee, Satire